AKWPKWỌ AKWPKWỌ |
AKW EDKWỌ AKW EDKWỌ AKW .KWỌ
Kedu otu esi azụta agụba mkpofu?
Dika isi aguba, enwere ike kee ya uzo abuo: isi edozi ya na isi ibughari ya. Nhọrọ na-ezighị ezi nke agụba nwekwara ike imebi anụ ahụ nke ihu, yabụ ịhọrọ ezigbo agụba nke dabara gị na ya bụ nka izizi ịmụ. Nke mbu, nhoputa nke aguba. 1. Ofu ngwá ọrụ isi ...
Ọ na-abụkarị ụmụ nwanyị
Ichefu na o buru obere nwa eze ugbu a bu ugbua inye onwe gi onyinye. GoodMax, kpokọtara gị na ịhụnanya na ịma mma. Ọ mara mma dịka ọ dị. GoodMax, Nye gị ọhụụ ọhụụ, dị ọcha ma nwee ọyableụ. Taa m ga - ekwu maka ụdị aguba ụmụ nwanyị.
Ezi mma na ezigbo ọnụahịa
site ha na 21-06-23
Diamond dị oke ọnụ mana ọtụtụ mmadụ na-azụ ya n'ihi na ọ dị mma, maka otu ihe ahụ, ọnụahịa anyị dị ntakịrị karịa ndị ọzọ mana ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ anyị ka anyị bụrụ ndị na-azụ ahịa n'ikpeazụ n'ihi ezigbo mma anyị mgbe atụlechara ọnụahịa na mma na ndị ọzọ, na nke ahụ mere na ngwaahịa anyị nwere ike ịbụ ...
Ga-eji ude edozi tupu ị kpụọ?
Enyi, Enwere m ike ima ụdị aguba di nke ndi nwoke? Akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ eletriki. Amụtawo m ọtụtụ ihe banyere uru nke agụba aka, nke na-eme ka ihu gị dị ọcha ma dị ọcha karị, kamakwa na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe ma nwee ntụsara ahụ. Ọ bụ ezie na ajị agba bụ akara nke nwoke tozuru etozu, ...
Otu esi echebe akpụkpọ gị mgbe ị na-akpụ ntutu
Mmalite nke ụbọchị na-amalite mgbe ị tetere ụra wee saa ahụ, mana ọ bụrụ n ’ị kụrụ aka n’amaghị ama mgbe ị na - akpụ afụ ọnụ, ọ ga - abụ ihe na - egbu mgbu. Aguba ahụ kpochapụrụ akpụkpọ ahụ n'ụzọ kachasị ihere, gbubie anyị ma bute oke ọbara ọgbụgba. Ọ bụ ezie na anyị na-arụsi ọrụ ike ...
Ajụjụ na shaving
Ọtụtụ n’ime anyị nwere ịkpụ afụ ọnụ ọ bụghị naanị maka nwoke kamakwa maka nwanyị, ọdịiche bụ na nwoke na-akpụ ntutu na nwanyị na-akpụkwa ahụ ya. ma maka agụba nri ma na agụba eletrik, ọ ga-enwerịrị nsogbu karịa ma ọ bụ obere. taa, ka anyị kwuo maka agụba nri. Maka nsị nri, anyị nwere ike ...
GOODMAX BLAD RAZOR MKPUGWU
Enwere ụdị nchekwa nchekwa abụọ, otu bụ ịwụnye agụba nwere ihu abụọ na njide agụba, nke ọzọ bụ ịwụnye ihu abụọ nwere ihu abụọ na njide mma. Mgbe ịkpụ afụ ọnụ na mbụ agụba, onye ọrụ kwesịrị ịgbanwe kọntaktị n'akuku n'etiti agụba ihu na ajị agba iji hụ ...
Otu esi eji agụba eme ihe ka o wee zie ezi
site ha na 21-05-10
Usoro ziri ezi maka ụmụ nwoke ịkpụ afụ ọnụ. 1 prelude ka afụ ọnụ 2 nkeji. Afụ ọnụ siri ike karịa anụ ahụ, yabụ ịkwadebe tupu ịkpụ afụ ọnụ dị mkpa iji mee ka ịkpụ afụ ọnụ dị mfe ma ghara imerụ akpụkpọ ahụ na esemokwu nke ịkpụ afụ ọnụ. 1 nkeji na-ekpo ọkụ towel na ihu gị: i nwere ike ide a h ...
Razors na-egosi ngosipụta nke Canton ngosi
N'ihi Coivd-19, akụ na ụba nwere mmetụta dị ukwuu. Dị ka ọkachamara agụba ọkachamara, ụlọ ọrụ anyị ———— Ningbo Jiali Plastics Co., Ltd enweghị ike ịga canton ngosi na 2021 ọzọ.Ọ bụ ya mere m ji dee akụkọ a maka ụmụ okorobịa gị. Gọọmentị anyị kpebiri inwe ngwaahịa ...
Kedu ụdị aguba anyị nwere ike inye
OurcompanyNingboJialiPlasticsCo., Ltd s a ọkachamara rụpụta na-emepụta aguba si otu agụba na isii agụba. Ha abụọ dị maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ndị nwere ike ịtụfu na otu. Nwanyị agụba Na-eji katrij eme ihe mejupụtara ka ọ na-akpụ afụ ọnụ ...
Otu esi choputa aguba kwesiri umuaka
Kedu ụdị onyinye ị nwere ike izigara enyi gị nwanyị? nwalee ụdị ọhụụ eji agụba GOODMAX, mgbe ahụ otu ị ga-esi họrọ agụba dabara adaba maka ha ma ọ bụ maka onwe gị, a ga-enwe ntụnye maka gị: Nke mbu kwesịrị ịpụta. n'ihi na ụmụ agbọghọ mgbe niile dị ka asso ...
Akwa mepụtara - Aguba agụba
Aguba bụ ihe dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị ọ bụghị naanị maka ụmụ nwoke, ị maara mgbe na otú agụba si chepụta. A chọtara agụba izizi kemgbe 1800 afọ gara aga. A na-eji agụba, ọla kọpa, na ọla edo kpụọ ihe ochie.Amerika emeela nnukwu ihe n'akụkọ ihe mere eme nke agụba Na 1895, G ...